Jarrell Miller Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts:
musha nyika dzakabatana Mabhokisi Jarrell Miller Mwana Wenyaya Nyaya Yacho Plus Untold Biography Facts
Childhood Biography inopa Nyaya Yakazara yeAmerican nyanzvi yebhokisi ane zita remadunhurirwa “Mwana Mukuru".
Yedu Jarrell Miller Yemwana Nhau uye Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Hongu, munhu wose anoziva ndiye mumwe wevatambi venhabvu vanoshanda pasi rese. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezve Jarrell Miller's biography, iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwe ado, ngatitangei.
Jarrell Miller Yemwana Nhau - Hupenyu hwepakutanga uye Mhuri kumashure.
Kutanga kubva, Jarrell King Miller akazvarwa pazuva regumi nemashanu raChikunguru 15 muBrooklyn muNew York, United States. Akazvarwa kuna amai veCaribbean uye kuna baba vekuLatin America.
Nyika yeAmerica yemarudzi akasanganiswa neDominican, Haitian neIrish midzi yakatanga kusimudzwa kuBedford-Stuyvesant nharaunda yeBrooklyn, kwaakapedza makore maviri ekutanga ehupenyu.
Jarrell Miller ane mhuri yemhuri yakasarudzika.
Akazove akakwidziridzwa nenhengo dzemhuri yake kuBelize muCentral America kwemakore mashanu asati adzokera kuBrooklyn.
Mudiki Miller aive wechikamu chikuru chehudiki hwake, mwana akanyarara asi akatsamwa aisazeza kutora kurwa pese paainzwa kugumbuka.
Pamusoro pehondo dzakadai, akadzingwa pachikoro chejunior chepamusoro kuBrooklyn nekukuvadza zvakanyanya mumwe mudzidzi. Sekureva kwaMiller:
'Uyu mwana akaedza kundibhadharisa uye ini ndakaita iyi nhabvu ichienda paari, chop block. Ini ndakanyura mumabvi ake iye ndokupepeta kumusana kwake, uye anga ari akati f ***** up '.
Nekuda kweizvozvo, mutambi wetsiva akatumirwa kunogara natete vake kuCanada. Miller akapedza makore maviri ari munyika maaive akazorora uye akatanga kuda mimhanzi asati adzokera kunzvimbo yake kuBrooklyn.
Jarrell Miller Dzidzo:
Miller akapinda zvikoro zvakawanda achifunga nezvehudiki hwake hwaitenderera pasirese. Chinozivikanwa pakati pezvikoro ndiThomas Edison High School muNew York.
Kare Miller asati apedza chikoro, akadzidza Muay Thai tsiva paakanga akura 14 paGym muBrooklyn. Achitaura nezvezvikonzero zvekudzidziswa, Miller akatsanangura kuti:
"Chikamu chayo chaive kuda kugona kurwa, ' anoti. 'Ndakanga ndiinayo mumusoro mangu kubva pamberi peCanada iyo yandaifanirwa kudzidza kudzidzira kurwa uye kuti ndikwanise kuzvidzivirira kune vanhu vanopfuura mumwe chete ".
Jarell Miller (wepakati) akatanga kudzidzira tsiva mugore ra2002.
Pakazoedza miitiro yekudzidza akaona Miller achienda kuMuganhu weManhattan Community College kwaakadzidza semesters maviri asati asarudza kuisa pfungwa pabhokisi.
Jarrell Miller Biography - Yekutanga Basa Rehupenyu:
Miller akatanga nekudzidzira Muay Thai paakanga aine makore gumi nemana asati achinja kuita amateur Kickboxing.
Mushure mekuwana rekodhi isina gwapa ye14-0,7 KO's, Akashandura hunyanzvi muna 2006 uye akahwina kickboxing Eastern & Western Conference Finals kuSan Antonio, Texas muna 2008.
Pakukwirira kwebasa rake rekickboxing, Miller akave mudiwa wemutsigiri muna 2012 uye akanyora kurasikirwa kuviri murekodhi yake yese yehunyanzvi ye21-2, 9 KO's.
Kurasikirwa kwekutanga kwakauya panguva yeK-1 World Grand Prix 2012 Yekupedzisira muZareb Croatia, uko Miller akarwa naMirko Cro Cop.
Yechipiri yaive sarudzo yakabatana mushure mekunge Miller adzoreredza achipesana naMirko Cro Cop makore maviri gare gare (2014) kuKubwinya 17: Los Angeles kuInglewood, California.
Jarrell Miller akarasikirwawo nemutambo wake wakatarisana naMirko Cro Cop muna 2014.
Jarrell Miller Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Miller anga achiri nyanzvi kickboxer paakaita nhanho yake muamateur boxing muna 2007.
Kurwa kwake kwekutanga seamateur ndiko chete kurasikirwa kwaakanyora mune yake 10-1 amateur rekodhi asati atendeuka pro pa18th yaChikunguru 2009.
Hondo mbiri dzekutanga dzeBrooklynite sehunyanzvi dzakamuona achikunda ane ruzivo Darius Whitson asati agogodza Isaac Villanueva.
Miller anopisa akachengetedza mutsara wake wekukunda kusvikira abata dhiza naJoey Dawejko kuMohegan Sun Casino muUncasville, Connecticut.
Miller haasati arasikirwa nechero kurwa semubati wetsiva asi akabata dhiza naJoey Dawejko muna2013.
Jarrell Miller Bio - Simuka Mukurumbira:
Miller akaenderera mberi achihwina kurwa mushure mekurwa uye zvishoma nezvishoma akatanga kuita kuti vezvenhau vatarise nekurwa kwega kwega kwekukunda. Pamusoro pezvo, akaona kusimukira kwakakosha muzvikamu zvake neWBO, WBA neIBF.
Akazopedzisira ave neyakanakisa nguva yekubudirira paakakunda Johann Duhaupas musi wa28 Kubvumbi 2018.
Nekukunda, Miller akazova WBA anosungirwa kukwikwidza uye kupokana Anthony Joshua kuzorwa naye muBrooklyn. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Miller akakunda Johann Duhaupas kuti ave mukwikwidzi weWBA muna Kubvumbi 2018.
Jarrell Miller Anoda Hupenyu - Musikana, Wife, Mwana?
Jarell Miller haana kuroora asi mukati mebasa rake akadanana nevakadzi vakati wandei.
Nekudaro, ihukama hwake hwekare nemusikana waDeontay Wilder, Telli Swift akaita misoro.
Jarell Miller akambodanana nemusikana waDeontay Wilder, Telli Swift.
Telli mudiki weAsia (Filipino) aimbove naMiller asati adanana naDeontay Wilder.
Kunyangwe atove nemwanakomana naWilder, Miller haasi wekurega achienda sezvo achitarisira kudzoka naye. Zvichakadaro, Miller ndiye baba vemwanakomana waakaberekerwa naamai vasingazivikanwe.
Jarell Miller ane mwanakomana waakaberekerwa naamai vasingazivikanwe.
Jarrell Miller Mhuri Chokwadi:
Miller akaberekerwa mumhuri yakaoma. Tinokuudza mashoko echokwadi nezvemhuri yemhuri yake.
Nezve Baba vaJarrell Miller:
Miller akaberekerwa kuna baba veLatin America avo vakasiya mhuri achiri mudiki. Nekuda kweizvozvo, akarererwa nababa-nhanho-baba avo pamwe vakaona pakurera kwake.
Miller aive nehukama husina kutsiga nababa vake-baba uye akambomusungirira kumadziro nekuti aive nehasha naamai vemubhokisi.
Pamusoro peJarrell Miller waamai:
Miller ane amai vane hanya vanobva kuCaribbean. Zviri kuburikidza neropa raamai vake iro Miller anoti ane sekuru vekuIrish - vachena. Amai vaMiller vanga vachimutsigira zvikuru kubva pavakatanga kusvika zvino.
Ndiye iye akatuma mutambi wetsiva kuti anogara natete vake muCanada uye aenderere mberi nedzidzo yake mushure mekudzingwa kuchikoro chejunior chepamusoro muBrooklyn.
Jarrell Miller ane yakaoma mhuri kumashure.
Pamusoro peJarrell Miller's Siblings:
Miller anoti ane vanin'ina vangangoita makumi maviri neshanu avo vasiri pasi pegumi nemashanu vakaberekerwa baba vake vekubereka.
Mukuwedzera, anotarisa vana ve5 vehanzvadzi yake mukuru Greg sevanin'ina vake.
Chikonzero chekuverenga vazukuru vake sevanun'una hachina kubatanidzwa nekuti mukoma wake mumwe akamurera navo achiri mudiki. Mutambi uyu ane hanzvadzi dzaakakura achidzivirira.
Jarrell Miller Chokwadi cheMunhu:
Chii chaunoziva nezvaJerrell Miller's persona kunze kwezvaakaedza kuita? Gara shure apo isu tauya kugadzirwa kweunhu hwake kukubatsira kuti uwane mufananidzo wakazara wake.
Kutanga, Miller ane munhu anosetsa uye anopihwa zvakanyanya kuzvidzora.
Mutambi wetsiva werudzi rwebi-racial anorema anoda kusvika mazana matatu emapaunzi aine dumbu riri pedyo rakabudikira haanei nekuudza vanhu kuti anodya mazana matatu echeeseburgers pagore kuti ave nechokwadi chekuti kuchengetedza ake matanhatu-packs abs kunova chinhu chinonetsa.
Uye zvakare, iye ane hunhu uye anofarira kutaura. Anoda kutaura, hunhu hunomuita iye anoyevedza anozvikurudzira.
Chii chimwe? Miller anozvitsanangura semwana mukuru pamoyo uye anobvuma kuti chikafu kunyanya cheeseburger, chinomufadza. Anofarirawo zvematongerwo enyika uye anoremekedza mhuri zvakanyanya.
Miller ane hunhu hunosekesa uye hunhu kunze kwemhete.
Jarrell Miller Mararamiro:
Kunyangwe kukosha kwaMiller kuchiri kuongororwa, akapa humbowo hwakakwana hwekurarama hupenyu hunogodora. Uchapupu hwehupfumi hwake hukuru ndidzo dzimba dzakanaka dzaakaparadzira kutenderedza America.
Mukuwedzera, ane ruzivo rwakanaka rwekutengesa motokari dzinoshongedza hupenyu hwake uye hunozivisa kuvepo kwake semambo weputi yake nechende. Iko motokari dzinosanganisira asi hazvirevi kuna Ferraris, McLarens, Aston Martins nezvimwewo.
Jarell Miller ane ruzivo rwakanaka rwekutengesa motokari dzinoderedza mwoyo wake.
Jarrell Miller Chokwadi:
Miller akashanda akati wandei emabasa epashure mushure mekupedza chikoro chesekondari uye mumazuva ekutanga ebasa rake.
Akatanga kushanda muchitengesi chemotokari kwemwedzi mitanhatu asati ashandira sechengetedzo kwemakore matatu, Akashandawo sebouncer, mutyairi uye kumishonga yemishonga. Pamusoro pazvose, anotora basa rake naDunkin Donuts kuti rive rake rekutanga basa chairo.
Jarell Miller Akashandira Dunkins Donut pakati uye akaita mashoma mabasa mashoma mumazuva ekutanga ebasa rake.
Iye muridzi uye anomhanyisa chikoro chekarati pamwe nekambani inozivikanwa seBig Baby Trucking Company.
Iyo kambani inopa haulages masevhisi kuburikidza nekushandisa maviri maviri-mavhiri marori. Uye zvakare, iye muridzi wemubati wegym kuAstoria, Queens neLong Island. Iye zvakare anotarisira kuvhura mamwe magyms e-purofiti uye zvisiri-purofiti zvikonzero.
Akatora zita remadunhurirwa rekuti "Big Baby" uye akazotsvaga kurwira mumanapukeni mumazuva ekutanga ebasa rake retsiva.
Kubudirira kwakauya mushure mekukurudzirwa kwechidyiro chake chekutanga uye kufanoona kuti gimmick yaizomuwanira kushambadzirwa kwakaringana. Nekudaro, Miller anoenderera achikudza zita rake nekuonekwa achipfeka napukeni uye nekuyamwa dhamu.
Jarell Miller anoita chikamu chimwe nechimwe che "Big Baby" kusanganisira kupfeka napukeni uye kuyamwa padhoma.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Jarrell Miller Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!